Umshado ingenye isisekelo ezidingekayo ukuze umphakathi ozinzile. Enye njalo ukuthi ufunde okulungile nokungalungile. Kusemqoka ngokuphelele ngoba umphakathi umsebenzi. Thina awabhekiseli nje kuphela imithetho, kodwa ikakhulu ikhampasi yangaphakathi - ukuziphatha okuhle, kokubili ngamunye futhi abantu emhlabeni.
UNkulunkulu awuniké amazwi abanye elula eziyisisekelo esintwini, awayona eziningi, kuphela eziyishumi inombolo. Uma abantu emhlabeni wethu sabenza baya emhlabeni wayekade ezahlukene ngokuphelele!
Omunye angase abuze ukuthi yini engalungile ukuthi isibonelo ukuhlonipha uyise nonina?
You cha dlulisa - akusiyo kuhle ukwenza ukusula naye?
Ungebi - indlela enhle bekungeke kube umphakathi lapho kungekho entshontsha eyodwa?